Coulda Izahay Me — Trip LEE - OFISIALY SITE
Hanisy ratsy aho satria Eric Garner lahatsary dia nampivaloharika mijery. Rehefa mivady voalohany nijery azy io volana lasa izay, isika samy nitomany. Ny fiainana dia fanomezana tsara tarehy, ary izany mampieritreritra ny mijery fa ny fiainana hiala ny vatana olona - indrindra fa raha ny nalain'ireo lehilahy hafa. noheveriko, "Azo antoka fa ny olona dia tsy afaka afa-maina amin'izany. Raha kely indrindra azy ireo any koa hamaly ny zavatra amin'ny fitsarana. "
Nieritreritra aho hoe diso. Ary izay maharary.
Hanisy ratsy aho satria dia zava-doza ho lehilahy mainty hoditra any Amerika. Fantatro fa ny fanambarana ihany no manafintohina ny olona sasany, saingy tsy miangatra marina.
Hanisy ratsy aho satria mainty ny fiaraha-monina no mandratra, vahoaka mikotringa miaraka noho ny olana sarotra maro.
Aho hanisy ratsy noho ny hafahafa hazakazaka-ins nanana aho tamin'ny polisy tany aloha.
Hanisy ratsy aho satria mainty rehetra ny olona fantatro efa nanana toy izany koa hazakazaka-ins.
Hanisy ratsy aho, satria ny ratsy polisy vao mainka ho sarotra ho azy ny tsara polisy mba hanao ny asa manan-danja izy ireo efa nantsoina ho.
Hanisy ratsy aho, satria tsy maintsy mampianatra ny zanako lahy ny toy izany koa ny raiko maintsy hampianatra ahy: "Ny olona dia mihevitra ny fandrahonana ianao mahalala na inona na inona alohan'ny momba anao, ka tsy maintsy ho tsara kokoa noho ny fotsy namanao atao. "
Hanisy ratsy aho, satria olona sasany tsy miraharaha. Te handresy izy ireo fa ny tohan-kevitra noho ny hanisy ratsy amin'ny ireo izay naratra.
Hanisy ratsy aho, satria manam-pahefana dia tsy afa-miala amin'ny ota sy ny brokenness izay hamely ny sisa antsika. Ary izay voantso polisy ny fanaovan-dratsy dia meloka izany ny tenany, Aiza no mitodika? Faly aho satria olona manana lehibe mba hitodika any, ary manantena aho fa hitondra ny rariny Andriamanitra amin'ny farany. Kanefa tsy midika tsy hanisy ratsy aho.
Hanisy ratsy aho, satria ny loza izay mahazo mikasika ny haino aman-jery dia tsy ny ihany no loza. Maro kokoa.
Fa namako izay tsy mahatakatra, masìna ianao, alao ny fotoana mba hihaino sy hangoraka. Ny hoe 'mailaka hihaino sy tsy mora ny miteny "dia mariky ny fanetren-tena sy fahamatorana. Alohan'ny manohitra, maka fotoana mba hihaino any an'ireo mandratra.
Maro amintsika no hanisy ratsy, satria ataontsika ny tenantsika, “Mety efa nisy ahy.”
*Vakio ny tonony amin'ny hira Eto
Joshua • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:30 PM • navalin'i
aoka izany fam. Tsapako ny fanaintainana
Cisco • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:30 PM • navalin'i
Coulda efa ahy !!
Jeremiah • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:32 PM • navalin'i
Efa manana izany hevitra, ary na dia bebe kokoa momba ny fomba fiainana dia azo hesorina ary mety ho faty izany olona tsy nahalala an'Andriamanitra. Tena mampatahotra ahy sy mampalahelo ahy koa <3
Shana • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:37 PM • navalin'i
Eny Tompo, tsara
Marco • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:38 PM • navalin'i
Hanisy ratsy aminao, I dont mahatakatra ny zava-misy 100% tsy ho azoko natao. I no mahazo an'i Jesosy sy izay tokony hiaina tahaka. mandeha, sahirana, hanisy ratsy sy hiara-miezaka hampandroso.
Sam • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:40 PM • navalin'i
Misaotra anao nizara ny fonao, ary ny mampiasa ny talentanao mba hametraka azy ho mozika. Tsy sickens ka Mampalahelo ahy ihany fa tsy ny olona no ho namono, fa maro ihany koa izay (anisan'izany ny Kristianina milaza maro) minia tsy mahita ny loza sy ny tsy rariny.
“Hanisy ratsy aho, satria olona sasany tsy miraharaha. Te handresy izy ireo fa ny tohan-kevitra noho ny loza amin'izay naratra.”
Noho izany, marina loatra, Trip. :(
Mivavaha, mivavaka ny rahalahiko & rahavavy.
MelissaMcKim • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:40 PM • navalin'i
Tena Te-hividy ity hira ity!
Misaotra anao Trip
Ny zavatra toy izany ianao niteny fo maro mahatsapa
Izany fanompoam-pivavahana ho ahy
Misaotra anao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana sy ny mizara izany aminay izay rehetra
Kirk • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:45 PM • navalin'i
Izaho dia Indianina any Amerika avy calera, Oklahoma. Aho choctaw Indiana ary rehefa avy nandre momba ny Ferguson roa herinandro lasa izay, ary afaka hahatakatra ny fankahalana sy ny fahoriana mahatonga sarotra ny maha-samy hafa firazanana eto amin'ity taona tsy hoe izy ireo no mankahala rehetra loko ny hoditra izy ireo mandray ny fahafahantsika mba hampiroboroboana an'Andriamanitra ary very ny asa mahatonga ny izany na ny ratsy fa mivavaka aho mba izao tontolo izao ity dia hahazo tsara kokoa fa hahatsiaro mandrakariva Andriamanitra dia manana drafitra ho an'ny rehetra na ny ratsy na ny tsara isika, mila finoana sy izay zavatra tsy manana intsony isika miankina be loatra ny governemanta fa tsy ny miantehitra amin'Andriamanitra !
Tyler • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:47 PM • navalin'i
Tia anao rahalahy. Tandremo ny ady tsara. Mivavaka ho anareo.
Jordania • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:48 PM • navalin'i
An mahagaga hira. Ilaina ho an'ny tanora mba hihaino sy hianatra avy. Ataovy izany diany
Joel Benjamin Neve Nosy • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:52 PM • navalin'i
Dia eto aho tany Ouganda, fa ny foko dia mavesatra ihany koa. Dia mavesatra. Eric Garner, Repair Rice, Mike Brown. Dia mavesatra.
DustinSimmons • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:56 PM • navalin'i
Nice hetra maneho mainty fiainana manan-danja sy tsy azo odian-tsy hita eo imason 'izao tontolo izao. Ny rafitra fa efa niantehitra tamin'ny nandritra ny fitsidihana fohy eto An-tany no tsy nahomby antsika, imbetsaka, ny fotoana dia lasa matahotra noho ireo olon-tiantsika sy ny samy hafa. Manantena aho fa afaka hametraka ny maso rehetra ny Tompo Izy ary hitombo kokoa tahaka ny olona iray, Ny vahoakan'Andriamanitra. Mijanòna matanjaka amin'ny finoana sy ny asa mafy, GAWVI sy ny Trip Lee! Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana!
Neal_Spencer • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:56 PM • navalin'i
Fotsiny aho te-handefa hafatra anao. Man, ny lasa tapa-bolana no sarotra ho ahy koa hitsimoka. Aho mpitandro filaminana iray ary tena sarotra Efa nahita ny sasany ny toerana tena olona (rappers, mpihira, namana, etc.) miresaka momba ny polisy izy ireo ny fomba. Tamin'ny voalohany aho dia tezitra, kivy, ary vonona ny hiady hevitra amin'izao tontolo izao momba ny fomba tsy hahatakatra ny fomba sarotra ny asa dia, ny fomba mety ho mampatahotra indraindray… Heveriko aho nipetraka tao anaty fefy, satria vao mainka novakiko momba ny olana, dia vao mainka Niresaka tamin'ny namako, vakio y'all ny sata momba ny fomba Efa nitsahatra bebe kokoa ny polisy, nanana ny fiara nitady more, dia toy izany hatrany ny toy izany… Vao nahita ny tenako tena ketraka nahazo momba ny foto-kevitra iray manontolo.
Manana ny fomba nijanona fiara. I intsony azy ireo ara-bakiteny be mifototra amin'ny zavatra 80% ny fotoana (expired fisoratana anarana, fiantohana, etc.) satria izay no ny “colorblind” fomba nitady ny olona. Ary ny hafa 20% ny fotoana dia ny fiara raha manao zavatra tena nampiahiahy sy miharihary fa olona tsy hino mpitandro filaminana iray ny fampiofanana dia hieritreritra dia hafahafa raha hanara tamin'ny iraka toy izany koa aho. Ny teboka aho dia miezaka hanao izay miezaka ny hanao ny tsara indrindra ny hijanona manavakavaka, ka dia tsy mitarika aho fiara eo satria mijery “voafetra sy tsy ampy” na satria ny olona mitondra fiara dia toa “toy ny jiolahimboto”. Ny zavatra, Tsara tarehy faly aho momba ny fomba foana aho manao ny asa, ary hidera an'Andriamanitra noho izany. Heveriko izay ketraka aza aho, dia izany no nahatsapako fa tena kely ato amin'ity olana BIG. Arakaraka ny Niadian-kevitra, dia vao mainka aho, nihaino ny mainty hoditra sy ny Arabo namana lazao ahy ny momba ny tantara sy ny mety ho voafetra sy tsy ampy antony fikarohana sns. dia vao mainka aho nahatsapa Tsy noeritreretiko mihitsy ny fomba hanampiana izany olana.
Fantatro fa mila mivavaka, ary efa nisy, satria fantatro tsara polisy maro avy teo, izay miezaka ny tsara indrindra sy tia io asa ho an'ny rehetra ny antony tsara… Fa ny olombelona Heveriko rehareha ao ahy te-ho afaka hamaha io olana io, ary tsy haharitra ny malaina raha mbola mitohy ity olana ity manerana an'i Amerika. Fa olona mila voatsiary fotsiny… Noho izany, Heveriko fa ny zava-kendren'ny ity vola taratasy ity dia ny hoe:, Tsapako ny fanaintainana kiboriny. Tsapako ny fangirifiriana maro ny namako, izay efa iharan'ny polisy voafetra sy tsy ampy ny asa. Ary ny hevitry ny hoe / mahafaka ny, Te hiala tsiny na inona na inona toe-javatra mahazo aina ianao natao ny alalan 'ny iray amintsika. Ary ny tapany faharoa ity vola taratasy ity dia vavaka fangatahana fotsiny ihany, mba hitandrina ny lohany ka mitady fomba hanatsarana ny fiaraha-monina, ny toeram-asa ho an'ny olona rehetra. Tsy mahazo kivy rehefa mahita olana ary tsy mahay manamboatra azy io.
Quick teboka farany, Tiako ny hira lehilahy. Ary nentiny ho dranomaso ao amin'ny andininy fahefatra izay niantso mivoaka ho any amin'ny tsara polisy. Misaotra ho an'izany olona!
Miaraka be fitiavana sy fanajana,
Danielle • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:59 aho • navalin'i
Nanohina ny foko. Misaotra anao ho anao mangarahara ny marina. Manao veloma anareo aho noho ny maha-Andriamanitra be fitiavana matahotra olona izay nisafidy ny hanome voninahitra ny fianianana no nitondra hiaro sy hanompo. Masìna ianareo dia ho fahazavana lahatsoratra ao amin'ny asa sy ny fanetren-tena fa ny Voninahitra sy ny fahasoavana dia hamirapiratra amin'ny manamboninahitra polisy hafa mba hanana fahafahana hizara ny vaovao tsara aminy. Fa amin'ny alalan'ny fanodinana bebe kokoa ny maha-mpianatra anao sy ny fitarihana dia hanjaka. Andriamanitra anie hitahy ny tananao tongony sy ny vava mba hizara izany fahamarinana izany amin'ny andro rehetra hiainanao. Ary ankehitriny fantatrareo ny asa fitoriana! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • Aprily 8, 2015 amin'ny 10:41 aho • navalin'i
Wow! ny hira fa dia tena lalina, ary tena avy amin'ny fo fa tena nandona fanamarihana toerana. Herinandro vitsivitsy indray aho dia nahazo mandatsa-dranomaso tao amin'ny fanjakana paompy fa ny asa dia mitaky antsika mba mandatsa-dranomaso ary dia hahita sheriffs nahazo mandatsa-dranomaso ihany koa ka samy aho hahita tiako subconsciously henjana ka tsy ny tahotra ny olona aza satria tsy nahalala azy ireo matahotra azy, fa izany fotsiny ho tsy mahazo aina izany fihetseham-po, satria ny fahazazany tany amin'ny 90 no ho polisy no tena nijery azy ho mahery fo sy avy amin'ny traikefa toy ny diany niotrika ela sy ny lohahevitra ao amin'ny hira ny maso tamin'izy ireo hoe mahery fo efa niova mandrakizay. Tsy amin'ny fomba ratsy anefa, satria fotsiny aho hahita azy ireo fotsiny ho toy ny zavatra tena izy any amin'ny faran'ny andro.. Ny olombelona.. Ary Misaotra an'Andriamanitra aho fa namela ahy hahita azy ireo ho toy izany, satria matetika tsy mahita (tsara ve aho, tsy mahita izany LOL) olon-tsotra ao amin'ny boky tantara an-tsary mivavaka ho mahery fo. Ary izany no efa birthed avy ireo zava-nitranga… Satria eo afovoan'ny ny fifanenjanana sy ny fahatahorana ireo manana andro na ratsy na dia ny fahatahorana ny fomba fijery ny olona amin'ny fanjakana entona paompy amin'ny hoody (na dia ny mangatsiaka avy), nametraka entona amin'ny unmarked fotsy rehetra Van (nefa tsy fantany fa Izaho manome fitaterana ho an'ny olona sembana ara-tsaina ny amin'ny asa),dia tonga izany fangoraham-po mahatsapa ratsy ho azy ireo, satria mba manana ny fahatahorana ahy ny hoe olona miampanga lainga sy / na mampahatezitra azy ireo hanao zavatra avy amin'ny teny hoe ny tahotra ny ainy sy ny lazany. Ny jacked fotsiny ny toe-javatra izay mazava tsara ny hevi-petsin'i fahavalo hampisaraka sy hitandrina antsika nisaraka toy izany ny tenan'i Kristy dia tsy ho amin'ny niray satria fantany ny zavatra afaka mitranga eo, rehefa izany dia. Fa kely kosa no mahafantatra fa rehefa manao izany dia mahatonga 23 taona vavaka lehilahy mpiady izay mifikitra na inona na inona intsony, na tsy kely noho ny Tompo Jesoa Kristy amin 'izao andro farany sy ny ratsy. Neal Manantena aho, ka mivavaha, foana fotsiny fa manetry tena sy toe-javatra rehetra mba hiditra ny rivotra iainana na inona na inona mandeha ao amin'ny famindram-po tahaka ny zaza ny theMmost Andriamanitra avo. hitahiana!
Kevin • Desambra 3, 2014 amin'ny 11:59 PM • navalin'i
Hey diany.. dia tsy ny anao efa hahatonga ny nahazo ny tànany anao. I belive fa ny zavatra rehetra mitranga noho ny antony. Izany no fahafahana hifandray amin'ny olona maro kokoa dia ho mandrakizay sary an-tsaina. ny olona mitady valiny dia mila fotsiny izy ireo bandy ho avy manaraka, ary spred ny filazantsara amin'ny alalan'ny mozika, fianarana Baiboly na mipetraka fotsiny sy manana fo am-po ny kafe. Angamba ny zavatra miezaka aho hoe toy ny nametraka Andy Mineo “Isika ao amin'ny maizina livin izao tontolo izao ny fomba iany mahalala raha toa ka tsy mametraka ny voninahiny amin'ny fampisehoana mba aoka maneho Misia mazava”.
ireo • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:03 aho • navalin'i
Misaotra ho an'ny rehetra ny mozika. Ianao sy ny rehetra 116 Click. Andriamanitra no tena mampiasa ianareo ry zalahy mba hilaza amiko, ary ny sisa amin'ny tanora ankehitriny, fa ny taranaka ho avy! Manantena aho fa ho indray andro any, Raha sitrak'Andriamanitra, mivoaka mba hanampy anao hiala amin'izany saro manodidina anao voalaza ao amin'ny iray amin'ny tafatafa.
Quentin Holland • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:04 aho • navalin'i
mahery hira…. mavesatra ny foko amin'izao fotoana izao satria ny rain'ny 3 tanora lahy Afrikana Amerikana. Izy ireo mahita fa manana fahafahana ho tonga ny filoha 'ny United States mahatsapa izy ireo fa tsy ho velona mba ho izy eo ambanin'ny toe-javatra sasany…
Tsy maninona ny handratra. Izao tontolo izao feno loto….
ny rano (Fanahy) sy ny Zanaka (Jesosy) dia afaka mamela ny zavatra tsara tarehy mitombo….. ny manantena Azy
Tjay • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:14 aho • navalin'i
Tanana teo mamantatra amin'ny. Io lalana mahazo mazava tsara ny hevitra manerana. Ireo toe-javatra dia tsy azo lavina malahelo Ary ny foko dia mavesatra. Aho, fa lehilahy fotsy lehibe manodidina ny olona ny loko. Na dia ny fianakaviana akaiky dia ny loko. Nihalehibe tany iray amin'ireo henjana manodidina in Providence, RI ny ambany sy ny lafiny atsimo no tena mahafantatra ny tsy rariny mitranga manerana ny firenena. To “miaro sy manompo” Tokony ho ny teny rehetra ao an-tsaina na mpiandraikitra maitso, manga, mainty na fotsy. Tantara ihany no mamerina ny tenany, raha tsy miova ny olona… Manantena aho fa milaza izany tapitra sy ireo olona rehetra izay efa nampalahelo teo amin'ny dingana afaka mahita fiadanana. #AllLivesMatter
Ken • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:25 aho • navalin'i
Mandefera U ny Bro, jus readin ny lahatsoratra efa in-dranomaso ahy. Ima 25 taona Meksikana sy ny olona mba toy izany ny fo burddened satria izay Mike volontsôkôlà antso, ny Popz ny polisy mahita zavatra tahaka izao no mahatonga ahy manahy fa fantatro izay mandrakotra antsika. Ary nony nahita izany aho amin'izao fotoana izao jus cryd Rahalahy sy mivavaka ho mpiasa hatsangana ho amin'ny fijinjana. Izany ny taranaka Rahalahy letz foana mifanety ao Aminy! Ny fitiavana enao Bro
meldd • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:33 aho • navalin'i
Mihalehibe, Tsy mbola hitako na inona na inona hitranga mety ho ahy hieritreritra fa mbola manodidina ny fanavakavaham-bolonkoditra. Tiako ny olona rehetra sy ny tanàna rehetra nahatsapa toy izany koa (na dia nieritreritra aho).
ankehitriny, I hitanareo izany rehetra izany loza&fipoahan'ny fahatezerana ny fahatezerana. Tsy manaiky ny olona manodidina ahy intsony. Ahoana no nahatonga izany rehetra izany? Nieritreritra aho no nandalo izany..
Lena • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:36 aho • navalin'i
mahery: lyrically ary musically. Tsy handeha hiaraka marika, mpanota avokoa isika rehetra ka tsy mahatratra ny voninahiny. Ary izaho dia fotsy ankizivavy. Noho ny tena Te-hieritreritra loko dia tsy manan-danja-ny any toerana eto amin'ity firenena ity sy izao tontolo izao. Amin'ny maha-mpanota: izany coulda efa ahy. Amin'ny maha-mahantra fotsy ankizivavy: angamba, nefa azo inoana fa tsy. Ary izay no lozabe sy mampalahelo.
Tiako ny fomba mifarana hira ity: ny manantena Azy. Tonga fiadanana sy ny fanekena ny fanantenantsika, rehefa, finoana, sy ny fitiavana ao Aminy.
Miguelperez • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:55 aho • navalin'i
Izany no tsara tarehy toy izany zavatra nanoratra ary milaza ny marina sy Feno fankasitrahana aho fa namaly anao zava-milanja ao am-ponao momba ireo olana ary natao nampahiratra ny masoko ho amin'ny olana bebe kokoa ny herisetra manodidina ny U.S. izay mikasa ny tsy miraharaha na tsy firaharahiana manan-danja toy ny vaovao. Misaotra anao hamandrika Lee.
Damian • Desambra 4, 2014 amin'ny 1:01 aho • navalin'i
Mac • Desambra 4, 2014 amin'ny 2:13 aho • navalin'i
Man, Namaky ny teny anio alina. Izy ireo namely ahy mafy. Zavatra tsy masiaka bisikileta ity firenena ity dia ao amin'ny…mikendry polisy jaded tanora lehilahy mainty hoditra noho ny antonona ny profil…tanora lehilahy mainty hoditra nahazo reraka ny ho lasibatra sy mijoro sy miteny ho an'ny tenany,…
Hitanao, lavo ny toetra mitondra miaraka aminy ny fironana compartmentalize ny zavatra niainany. Nisy olona nokaikerin'ny alika ny ho tahaka ny zaza, matetika mitombo ny miaraka amin'ny tsy fitiavany maizina rehetra canines…na toy ny tahotra, na ho fankahalana. Mety ho mafy handresy, satria mamela ireo fahatsapana…hahatonga azy ireo indraindray, andraso amin'ny madinika manamarin-tena.
Tripp, Fotsy aho. Mandra ny kilasy faha-4 taona, Lehibe tahaka ny anankiray amin'ny kely fotsy ankizy vitsivitsy ao amin'ny ankamaroan'ny faritra tany amin'ny faritra atsimon'i mainty Illinois. Namako rehetra dia mainty. dia, Nifindra tany Tennessee izahay. Dia natao nalefa tany amin'ny tale ny biraon'ny intelo tamin'izany taona izany noho ny miady amin'ny olona iray izay nandatsaka ny “N-teny”…IN faha-4 Grade…ankizy efa nampianarina ny nanasokajy sy tsinontsinona ny hafa….noho ny volon-koditra. Izany teny nahatezitra ahy…ny fotoana totohondry aho anao eo am-bavan'ny noho ny hoe izany. Tsy mbola infuriates ahy…Mivavaka fotsiny aho fa tsy totohondriny izao.
Man, Manana havana rehetra loko sy ny aloky ny hoditra….ary, hainao ve fa? Tena faly aho IT. Hazo ny fianakaviako mihitsy no mahatonga America lehibe. Ny fianakaviana no mpandrendrika ny American vilany. Ny fianakaviako dia mahagaga ary tiako azy rehetra.
Roa taona lasa izay, Dia nandeha namaky ny nasty fisaraham-panambadiana sy ny alalan 'ny ny fahadalana, tapitra ny mandany fotoana any am-ponja, ary ankehitriny dia manana firaketana heloka bevava. Aho nahita voalohany,-tanana ny vokatry ny ratsy polisy. ankehitriny, amin'ny fotoana rehetra ny fisafoana aoriana fiara mahazo ahy na ny polisy lasa mandeha ahy, Mieritreritra aho, “Inona avy ireo iany izany fotoana? Inona avy ireo iany hanaisotra ny hanome azy ny antony hiatrika ahy. Satria fantatr'izy ireo indray mandeha ianao ao amin'ny rafitra…ianao mpanao heloka bevava ho an'ny fiainana.” Avy eo aho dia tsy maintsy mibebaka noho ny tery saina sy ny tery saina. Hoy izy ireo paoma iray ratsy manimba ny bunch, fa Andriamanitra tsy hahatonga antsika araka ny endrik'Andriamanitra paoma…Izy no nanao antsika araka ny endriny. Izany maintsy hanisa zavatra, marina?
amim-pahatsorana, Rahalahy…rehefa avy namaky ny teny sy misaintsaina azy ireo sy mijery todika ny fiainako….mety efa nisy ahy, koa.
Tsy mba lazaiko fa ho afa-maina, na ny esorinao tsy ho hery misintona ny teny. Izany fotsiny ny mifanohitra. Misy olana, fa ny mainty sy ny fotsy olana tsy mainty & fotsy olana. Ny olona tsirairay dia tsy mitovy, ary mitaona ny fiainany amin'ny zavatra niainany ny manamarina ny fomba fijery ity tontolo lavo isika, miaina ao anatin'ny. Ny olana dia ny fahotana. Isika rehetra meloka izany. Misaotra an'Andriamanitra misy olona avy ao amin'izao fotoana izao izay mankatò ny Teniny ary miezaka hanampy hanasitrana. Nahazo anao aho sy ny maro hafa amin'ny fivavahako anio alina. Fitiavana be.
Mac • Desambra 4, 2014 amin'ny 2:17 aho • navalin'i
“Fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, avy eo tia fihavanana, malemy fanahy, misokatra ny hieritreritra, be famindram-po sy be voka-tsoa, manavakavaka sy tso-po. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.”
Jamie • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:18 aho • navalin'i
Diggin izany aho. Tanteraka jereo aiza ianao avy Tripp.
Stephlandry09 • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:42 aho • navalin'i
Na dia tsy afaka mifandray mihitsy izany satria izaho efa tanora vehivavy fotsy, izany nitondra ranomaso ny masoko. Ny foko efa mavesatra ny alalan 'ny rehetra fotoam-pitsarana Ferguson. Misaotra miteny momba izany sy ny fizarana ny zavatra niainana.
AaronCrim • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:23 aho • navalin'i
Misaotra anao Trip, Hitako fa tena nanampy tokoa izany. Izaho koa mba fotsy Kristianina avy any WV, Niady mafy aho noho izay mba hanao ireo zava-niseho. Tsy tena azo antoka izay tokony mieritreritra, (araka ny ho tena tsy vokany ahy mivantana) Na izany aza dia efa mba toy izany vaky fo ny mahita maro be ny rahalahy sy anabavy marary ary mizarazara. Vaky fo ny mahita toy izany ny mpiray tanindrazana maro ny hanisy ratsy. Misaotra indray Tho izany no nanampy ahy hahatakatra bebe kokoa ary hanampy ahy hahafantatra ny fomba tsara kokoa hivavaka ho firaisan-kina sy ny fiadanana. TAHIN'ANDRIAMANITRA
Jeanine pinkney • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:29 aho • navalin'i
Misaotra betsaka ho an'ity hira. Ny anadahiko naniraka Ahy ny rohy sy ny im Tena feno fisaorana noho izany io maraina io fitahiana. Izaho no iray niharan-doza, Very ny lahy Rashad Pinkney Desambra 21,2013. Ny ketrina basy herisetra. Mahamenatra ny fomba maka fiainantsika manokana. Black amin'ny Black heloka bevava ara-dalàna fomba fiaina eo amin'ny fiaraha-monina. Maro ny zatovolahy manam-potoana sarobidy ny aina. Aho no Mandratra mandrakariva ny fifaliako satria efa naka, Aho no Mandratra satria tsy misy andraikitra, Aho no Mandratra satria tsy azoko, Vao naratra!!! Fa velona sy tia Andriamanitro!!!
TerryMiller • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:40 aho • navalin'i
Fantatrao, Trip, Tsy afaka milaza na inona na inona fomba iray na ny hafa rehetra momba ny halalin 'ny olana. Aho fotsy hoditra. Tsy mahita ny fanavakavahana ny olona ho toy ny mainty hoditra no. Tsy mbola nitoetra amin'ny alalan'ny izany. saingy, ny zavatra fantatro dia, izao hira dia hira. Afaka ny ho be hira, Heveriko fa, raha nasandratry ny alalan 'ny tokony fantsona. Na izany na tsy, ya'll toa tsara tarehy amin'ny teboka amin'izany, dia raiso fotsiny ny fiderana, Dude. No, Tsy mino aho fa olona tokony pelatànana amin'ny toe-javatra mampalahelo. saingy, raha mino fa ny zavatra efa fantatra sy hita, dia mihazakazaka izany. Tena zavatra tena fiainana ianao miresaka momba eto. Ianareo rehetra dia tokony hanafaka mpanakanto Hanatratrarako ny raki-kira na ny fitambaran'ireo iombonana. Angamba na dia ny e.p. Mitondra fanentanana-bokatra tsy misy negativity izay rehetra tsy ara-pivavahana ny mpanakanto mba hitondra ho amin'ny latabatra. Na izany na tsy, asa lehibe eto!
Henry Strozier • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:00 aho • navalin'i
Great hira! Misaotra mizara ny fo aminay! Izany no tena mampalahelo! Mivavaka aho mba ho an'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy!
Louis • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:04 aho • navalin'i
Thanks Trip, izany tsara ny aiko.
Alasdair • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:15 aho • navalin'i
Misaotra ny drivel Trip Farrakhan.
Jacqueline Lugo • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:42 aho • navalin'i
Ny foko dia mizara ny fomba eto amin'ity tontolo ity. Be loatra ny tsy rariny! Ny foko mavesatra. Miandry aho tamin'ny andro 'ny Tompo tonga mba milaza ny vahoakany. Rehefa tsy hisy intsony fanaintainana. No more famonoana. No more ranomaso. Ny foko mivoaka ny fianakaviana tsirairay izay namoy havan-tiana tao ireo fomba mampalahelo sy herisetra. Misaotra anao Trip noho ny teniny sy ny fonao
Alasdair • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
Dillon Taylor nitifitra tao Salt Lake City. tsy misy fitaovam-piadiana. tsy misy heloka bevava. Ho fantatrareo hazakazaka Pimp.
Melody • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
Misaotra satria naka fotoana hanoratana ny momba izany. Tena fomba fijery tsy mandre matetika, ary tena tsy maintsy mandinika mandra vao haingana.
Mike • Desambra 4, 2014 amin'ny 9:35 aho • navalin'i
@alasdair ny fotoana dia manao, izay miezaka ianao mba hitsoka eny araka izay nolazainy tao amin'ny hira, fa ny polisy dia fotsy manana ary aza manao tombantombana ny mainty olona izay tsy manan-kery. Ny hoe fotsy sy miaina miaraka amin'ny lafiny iray ny fianakaviako izany fitsarana an-tendrony, ary ny lafiny iray izany amin'ny ampahany Afrikana Amerikana, Afaka milaza aminareo aho fa ny zavatra marina Trip nanao hoe:. Ho an'ny Dillon Taylor, izay tsy maintsy miaiky dia iray amin'ireo fotoana vitsy henoko ny zavatra tahaka izao mitranga, dia mety ho toy izany. Trip dia nilaza fa mbola misy ny olana amin'ny fanavakavahana sy ny fitsarana an-tendrony eto amin'ity firenena ity, Ary ny vokatry ny fahotana. Izany no olana tsy mandeha lalana iray, fa izao hira amin'ny fotoany avy izy dia miresaka momba ny tena maika adihevitra, ka amin'izao fotoana izao, dia ny areti-mifindra ny tanora lehilahy mainty hoditra izay tsaboina tsy ara-drariny, satria antonona ny stereotype. Ianareo dia hino izay tianao, fa mahita ny olana, ary hitsangana hanohitra azy, ary naratra amin'ireo naratra.
Henock Aristide • Desambra 4, 2014 amin'ny 9:49 aho • navalin'i
Tena mampalahelo ny zava-mitranga. Nice lalana Tripp.
@TheRealChrisZ • Desambra 4, 2014 amin'ny 9:55 aho • navalin'i
Mivavaka ho an'ny fanasitranana sy ny fampihavanana fa i Jesosy ihany no afaka mitondra!
Lean • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:30 aho • navalin'i
Heveriko fa mampidi-doza ny mampidi-doza sy ny maha-vavy, fa tsy fotsy ny mainty hoditra. Tsy mpanavakavaka aho fa ny ankamaroan 'ny heloka bevava izay commited hamely ahy, ny ankohonako, ary ny namana, ireo kosa dia mainty hoditra lahy. Malakia wasnt marina nefa.
Thebiggerpicture • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:49 aho • navalin'i
Nahoana izy no manohitra ny fisamborana? Tokony tsy ho nahafaty, fa tsy efa manohitra mpiandraikitra na. No, fa tsy ho anao raha toa ianao ka mankatò ny lalàna. Inona no tokony hatao mpiandraikitra hafa? Aoka ny olona handika ny lalàna, hanoherana ny fisamborana sy mandehandeha fotsiny ny andro? Rahoviana no hifarana? Efa nahita ny antontan'isa farany? Intelo mihoatra noho izany no maty fotsy hoditra BY NOHO polisy mainty hoditra. INTELO. Aoka izay Milentika amin'ny. Tsy mino aho fa ireo mainty hoditra ho lasibatra. Mino aho fa ny rotaka, fandrobana sy ny fandoroana ny zavatra nidina handeha ho fotsy hoditra ny ankizy mpanavakavaka (bc izy ireo mahita izany rehetra izany amin'ny fahitalavitra sy handeha mieritreritra mainty hoditra rehetra manao izany) ary mihevitra aho fa ny ankizy mainty handeha mieritreritra fa tsy maninona ny manao toy izany. Aza omena ny polisy ny antony “profile.” Atsaharo ny fanaovana ny mainty manodidina ny faritra mampidi-doza indrindra teny amin'ny tanàna rehetra. Ny olon-drehetra (loko rehetra) Mila mieritreritra intsony izy ireo mihoatra noho ny lalàna sy ny na inona na inona no hitranga raha toa ka handrava izany. (Hira tsara, anefa… manana fahaiza-manao)
Mike • Desambra 5, 2014 amin'ny 9:08 aho • navalin'i
Masìna ianao, alao fiheverana fa misy kokoa noho ny 3x na iza Kaokaziana toy ny misy ny taranaka Afrikana monina ao amin'ity firenena ity.
Izany dia manome ny fahalavoan'ny ny tahan'ny ny famonoana mifototra amin'ny hoe firy ny hazakazaka tsirairay hiaina eto.
MichellH • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:53 aho • navalin'i
Trip, izany no fomba hamahana ny olana, miresaka, fanehoana fihetseham-po, fanokafana ny sy nivavaka! tsy mankahala…Misaotra anao!
Afovoany aho antitra vehivavy fotsy. Manana fomba fijery hafa mihitsy. Herisetra ihany koa aho ho toy ny tanora vavy fotsy (herisetra ara-nofo foana) , ary efa niaritra ny fanavakavahana amin'ny fomba hafa. Ohatra raha nandeha ho asa noho ny fihoaran'ny lanja na dia tena mahay aho. saingy, Aoka aho tsy mahazo ahy, satria irery no tsy maintsy volana Andriamanitra, ary izany no Miezaka mampianatra ny tanora ankizy aho manodidina. Isika rehetra fanavakavahana miatrika, Isika rehetra, amin'ny fomba samihafa. Inona anefa no tanora lehilahy mainty hoditra miatrika mahatandindomin-doza ny ainy, Mino aho fa izany no hevitra maro no miezaka hahazo manerana.
Twiceborn • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:54 aho • navalin'i
Minitra vitsy talohan'ny nahita ny bitsika no nalefa tao amin'ny FB
“Indraindray dia horonan-taratasy ny TL & ve tsy maintsy mivavaka.
Tsy tsiny ny unchurched fa ny sasany dia toy izany ny Kristianina Inconsiderately Nonempathic #ButGod”
Tsara ianao Rahalahy Trip.. Ny mampalahelo dia malahelo aho..
I dont miady hevitra na te-hiady hevitra.. Fotsiny aho nivavaka ho fiadanana sy ny rariny ny olona.. #CrazyWorld
JR • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:04 aho • navalin'i
Trip, Tena miala tsiny aho noho ny fanaintainana manokana ary koa ny lehibe kokoa ny fanaintainana izay Afrikana Amerikana manontolo / Black fiaraha-monina dia tsy maintsy hahatsapa amin'ny fanazavana ny Mankaloiloy vokatra omaly.
Amin'ny maha-Kristianina fotsy, Izaho koa mba ta te hiaraka aminareo any am-antso ho amin'ny rariny ho an'ny vitsy an'isa toy ny tenanareo. Ary Izaho koa mba ta milaza fa rehefa nijery aho fa ny lahatsary Eric Garner ho faty volana lasa izay, fa minitra vitsy monja ireo, Afaka hametraka ny tenako ny kapany ary mahatsapa ny tsy rariny.
Amin'ny maha-Kristianina, izay mikely aina ao amin'ny faritra ny fankahalana ara-pivavahana tsy mitsaha-mitombo, Heveriko fa zava-dehibe ho antsika rehetra mba hahatakatra fa raha ny vondrona ihany koa ny lasa lasibatry ny mpitandro filaminana tsy tan-dalàna, isika dia hahita ny tenantsika toy izany koa amin'ny anjara asa, koa. Inona no antony iray hafa fotsiny ny antony tsy maintsy mibosesika ny rariny.
Tsy maintsy mibosesika ho mitovy sy fitsaboana ara-drariny ho an'ny rehetra – ho amin'ny hasin'ny olombelona. Tsy tokony hanaiky ny toe-quo. Voalohany indrindra ho an'ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny African American / Black fiaraha-monina, fa koa ho an'ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny. Tsy afaka ho velona any amin'ny tany jadona. Enga anie isika rehetra hianatra lesona maro avy amin'ny loza ny Eric Garner ny vono olona. Misaotra anao.
Ben • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:14 aho • navalin'i
Ny zavatra tiako indrindra momba izany hira izany fa manery ahy hahatsapa ny olana amin'ny fomba izay tsy teny fotsiny. Misaotra betsaka fa marina mampiseho ny ota tao am-poko ary koa ny fanavotana ny Mpamonjy lehibe.
Mivavaka amin'ny tanako ny vavako.
Pamela • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:21 aho • navalin'i
Misaotra anao noho ny teny, Trip. Dia tena miaiky anareo toy ny olona, ny olom-pirenena, ary ny mpino. Ny teninareo dia foana nanendry ny fanahiko ka nahatonga ahy hieritreritra. Vavaka ho antsika rehetra. Fitiavana be.
RyanH • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:35 aho • navalin'i
Moa ny stereotype marina? Moa ve misy ny stereotype, raha tsy nisy na inona na inona ho fanohanana ny mametraka ny? Fantatsika rehetra ny tonon'ireo hira ireo indrindra Rap andro. Ny mahitsy avy amin'ny helo, ary mahatonga ireo izay mihaino ny hiaina toy ny helo. Raha mahita kolontsain'ny olona mihaino hira momba ny famonoana polisy, zava-mahadomelina,, vonoan-olona, nangalatra, satria mahery setra, tsy nanaja, Mora azo ny mba hahazoany manana fironana hanao ambony kokoa ireo heloka bevava izy ireo mihaino. Misy porofo antontan'isa ho fanohanana toy izany filazana? Eny. Afaka vavolombelona rehetra avy amin'io fihetsika mamoafady Satana kolontsaina mpiangaly rap amin'ny isan-tanàna? Eny. Dia ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity mainty kolontsaina? Eny. Thats ny antony ny stereotype…Izy ireo ihany no mainty? No, fa ny volon-koditra rehetra, fa ny ankamaroan'ny olona mainty. Ka ny olana ara-kolontsaina eto fa tsy olana hazakazaka, Ary mitranga fotsiny izany fa ny kolontsaina isika dia miresaka momba ny dia talaky mainty. Raha tena manantena ny olona tsy stereotype, raha ny zava-misy ny raharaha dia ny hoe ao be dia be ny tranga (tsy tsy ny rehetra) ny ankavanana? Lazao fa ho an'ny an-dranomasina ao Afghanistan Izay mahita toa ny lehilahy iray ihany, izay namono ny tsara indrindra kiboriny ny herinandro alohan'ny. Ianao milaza azy intsony mametraka ny. Ny tsy fanavakavahana, ny fahavalo 'ny Andriamanitsika izay efa rendrika ilay nandringana amin' ity taranaka ity ny mainty hoditra amin'ny alalan'ny hip-hop sy ny haino aman-jery. Manohitra FARANY.
Thebiggerpicture • Desambra 4, 2014 amin'ny 1:01 PM • navalin'i
Izany zavatra foana koa nanao hoe:! Aoka tsy hisy Stereo-karazany eo amin'ny toerana voalohany. Ry zareo tao noho ny antony!
RyanH • Desambra 4, 2014 amin'ny 5:45 PM • navalin'i
Mila miaiky fa misy ny olana eto. Mila miaiky fa hip-hop kolontsaina (Rehefa miteny aho hoe, Tiako holazaina mpiangaly rap tsy ara-pivavahana izay rehetra momba ny fiainana ratsy) dia nandrava ny fiaraha-monina. Mila Atsaharo ny fanomezana tsiny “fanavakavahana” toy ny foto-doza ireo tranga. Ny marina dia ampahany lehibe amin'ny fiaraha-monina ny mainty dia nisy fiantraikany ratsy amin'ny alalan'ny mozika. Tsy ny fiaraha-monina ny mainty, ny izao tontolo izao, fa noho ny ankamaroan 'ireo rappers mainty, mainty hoditra mora hamantarana ny tenany tamin'izy ireo.
Kristianina Mila ireo fiantraikany ho an'izao tontolo izao manodidina antsika, noho ny an'izao tontolo izao. Ny izao tontolo izao dia tsy maintsy mahita Izay fanantenana ny voninahitra ao amintsika. Izany no hany lalana isika dia manova zavatra eto amin'ity tontolo ity voataonan'i ilay ratsy.
Fitaovana ho anao lavitra noho ny fiantraikany Lee fiaraha-monina ny mainty sy ny maro hafa amin 'ny fomba izay mitarika ho amin'ny tena fiainana. Enga anie isika tsy ho very izany fitiavana izany ho an'izao tontolo izao izay manery antsika mba hanolotra ny aintsika noho ireny.
Just fotsy iray hafa ankizivavy • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:47 aho • navalin'i
Beautiful fihetseham-po, tsara tarehy…tiako ity! Mitory izany ary tsarovy ny fahalalahana hiteny sy ny toy izany, tiava ny mitempo, fitiavana rehetra 116 tsindrio mozika, mahatsapa ny hirifiry ho an'ny ya'll, yep ataoko. Tsy niaina ny fiainana toa anao, Eny na dia nanana fahantrana, Kristianina nenjehina toy ny eny, segregated amin'ny manan-karena eny an-tsekoly, nanafika ho fotsy ao amin'ny mainty hoditra rehetra manodidina N voaroba tamin'ny kolaka ilay basy eny, fanafihana fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny tanàna ny mainty hoditra eny, miaina PTSD avy amin'izany herisetra eny, fisotroan-toaka naka ny fahazazako, fanararaotana naka ny tsy fananan-tsiny sy ny ahi-dratsy smokin miaraka amin'ny ray aman-dreny no fotoana tsara ny eny, miaro Neny-fiantsoana 911! Moms orona tapaka, Dada mitafy ny mangeja, yr dimy tovovavy antitra nikiakiaka STOP! ra manerana, Devils amin'ny tany, Be aho tovovavy ankehitriny. Nisintona ahy hiala, Eny nataony! Avy amin'ny muck sy ny fotaka! Avy amin'ny firaisana ara-nofo, zava-mahadomelina, fahafatesana, fitaka, tsy fahombiazana, Namonjy ahy, fa zavatra tsara kokoa. Isika rehetra dia mahatsapa fanaintainana, andao hiady ho iray Thang! Isika rehetra dia manana fijoroana ho vavolombelona, na ny esoeso rascism sexism(crae),fisotroan-toaka, fiankinan-doha, fahoriana, fiantraikany fifanoheran-kevitra, fa hitory ny fahamarinana sy ny fitiavana rahalahy ao amin'i Kristy! Inona no azontsika atao? Ataovy izay ataonao! Tia ahy tia anao! samy fomba, Kristianina mitsangana! Fitiavana fitiavana fitiavana ao amin'ny Tompo!
EnlightenedOne • Desambra 4, 2014 amin'ny 11:50 aho • navalin'i
tia ny fomba tena izany
Bill • Desambra 4, 2014 amin'ny 12:08 PM • navalin'i
Trip rahalahy, I nihaona anareo tamin'izany Cedarville roa herinandro lasa izay, ary foana ny tia sy nampirisika ny mozika. Ny lahateny amin'ny fitoriana lehibe! Fa manantena aho dia handinika ny lafiny iray ny vola madinika. Raha hoy ianareo: fa 'efa anao izany coulda'…Tokony ho fantatrao Toy izany koa fa mety ho ahy, ary efa antitra aho fotsy hoditra mpitory. Mandeha midina eny an-dalamben'i tanàn-dehibe na ny any ambanivohitra tanàna, Isika rehetra dia afaka ny ho iharan'ny fitsarana an-tendrony sy ny fankahalana…fotsiny noho ny lokon'ny hoditra ny…na inona na inona ny toetrantsika, na ny zavatra ataontsika tamin'ny fotoana. Tena maizina zava-misy ny Fahalavoana sy ny fahotana.
Fa amin'ny lafiny iray hafa….dia 'tsy nety’ ho anao izay voasambotra sy novonoina teny an-dalana ', satria dia ho namaly ilay polisy ho toy ny Kristianina, ary tahaka ny olona izay manaja sy mankatò ny manam-pahefana fa Andriamanitra efa nanendry, toy ny apostoly Paoly. Raha mandinika ny toe-javatra tsirairay ireo olona izay voalaza, dia miharihary fa nanao safidy izy ireo mba hanoherana, tsy hankatò, hiady na hanafika ny Leo izay nanao ny asany izy ireo voampanga ho manao amim-pahatokiana. Ary raha ny manamboninahitra mety ho meloka noho ny fitongilanana, fitsarana an-tendrony, na ho fankahalana, raha efa niara-niasa tamin'ny niharam-boina ny lalàna, izy ireo mbola ho velona sy afaka hanenjika azy ireo tsy rariny amin'ny fitsarana. Isika rehetra dia tsy rariny dia manaiky hozakain'izy….sy ny fomba mamaly azy….Matetika no mamaritra ny vokatra….tahaka ny nataony tamin'ny tsirairay ireo tranga mampalahelo.
Misaotra anao fandinihana izany, ary Aza misalasala Ahitsio aho raha diso aho izany, na raha ny toro-hevitra dia tsy araka ny Baiboly na mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy mihitsy. Andriamanitra anie hitahy anao rahalahiko, ary aoka ny miara-miasa ho an'ny fanasitranana….tsy mizara.
Stephanie • Desambra 4, 2014 amin'ny 1:30 PM • navalin'i
Tena sarobidy ny fiainana. Mampalahelo ahy ny mahita ny fomba 'ny fiainan' ny olona eo amin'ny fiaraha-monina dia tsy natao tao mitovy lafiny hafa firazanana. Tsy misy olona mendrika ny ho nitifitra izy na voagejan'ny ho faty. Mandria toky ireo izay mihevitra ny fitondran-tena izany karazana dia odian-tsy hita ny amin'Andriamanitra ianao Mampalahelo fa diso. Raha lehilahy dia tsy haharitra ny ny tsara izy no tsy maintsy valin 'ny Avo Indrindra. Trip Lee….ny fanaintainana / ny fanaintainanao izay tsy isalasalana fa tena tsy misy. Ary ny Tompo dia hihaino antsika sy mamaly araka. Fotsiny isika ho mafy orina ao Aminy, sy hankatò ny manao izay lazainy. Mivavaka aho mba ho toy ny olona miara-dia avy any Jesosy Name-pahendrena, fahefana sy hery fiovana tsara.
Jacob • Desambra 4, 2014 amin'ny 2:01 PM • navalin'i
Efa nisy ny fitaomam-panahy ho ahy hatramin'ny voalohany aho nihaino anao. Ary raha mbola tia ny hira ankapobeny, ity nahatonga ahy mampalahelo kokoa noho ny zavatra, ary tsy noho ny loza ny fahafatesana izay efa nitranga. Tena tsy mampino ny hiverina eo amin'ny fahitalavitra, na mamaky ny vaovao ka jereo ny zava-drehetra fa afaka manao ratsy eto amin'ity tontolo ity. Tsy fantatro na inona na inona mikasika ireo tranga manokana voalaza ankoatra ny haino aman-jery izay milaza ahy, na dia tsy maintsy milaza aho heviny sasany eo amin'ny tsirairay. Inona no tena mampalahelo ahy dia ny ny zava-misy fa tsy misy nahatsikaritra ny hetsika ny antony tsy mitady ny fahamarinana, ary nanorina ny rariny, ny fandefasana ny sy alienating ny hafa, manokana kokoa fotsy hoditra sy ny polisy. Ny fahitako azy, Ny hany zavatra fampiroboroboana ny fanavakavahana ireo izay mijoro eo amin'ny sehatra voalohany, manome ny hazakazaka sy ny fandikan-dalàna. Amin'ny voalohany, Handeha aho ny mamoaka ny bunch ny rohy ny tantara vao tsy ela akory aho namaky mikasika ny famonoana olona mahatsiravina izay nitranga tato ho ato ny fotsy hoditra ny tànan'i mainty hoditra, Nefa tsy te-hilaza mainty hoditra no mahatsiravina na latsaka noho ny fotsy hoditra, fa ny milaza fa ny olona rehetra eto no mijaly ary ny olona rehetra niharam-boina. Firy ny olona fotsy hoditra no nanontany anao momba ny voafetra sy tsy ampy amin'ny hazakazaka ins polisy? I manome antoka anareo efa-dry zareo azy, polisy manao fahadisoana. Im tsy miezaka maka lafiny eto, ny hevitra dia ny mitandrina ny fanavakavaham-bolonkoditra ihany no velona dia tsy ireo izay lazaina fa manao amin'ny fankahalana manohitra ny an'ny hafa firenena, fa asa iray ny tena antony fankahalana, rariny an'ny Tompo. Fa raha fiaraha-monina iray manontolo na ny vondrona mbola mino fa ny hodiny mahatonga azy ireo tsy mitovy amin'ny olon-kafa. Ireo izay mino ny hodiny mamela azy ireo hanao zavatra na hitondra tena amin'ny fanaraha-maso ny olon-kafa, na manome azy ireo alalana manokana mba ho tafintohina. Ny hazakazaka Tsy ny heloka bevava. Ary ny hoditra dia tsy hoe iza isika, na izahay Lehibe tao Afrika na Meksika, ny hoditra loko dia tsy ny kolontsaina na ny lova navelany. Tsy te-hahafantatra anao ho Trip Lee ny mainty hoditra, ary tsy te-ho fantatra amin'ny anarana hoe Jakoba ny lehilahy mainty hoditra, na Jakoba ny fotsy hoditra. Jacob aho, ianao Trip. Izahay tsy mitsaha-mitombo io ihany no hampandroso zarainareo araka ny fanekena fa izany dia any. Fa tsy misy fizarazarana. rahalahy rehetra. rahavavy rehetra. Rehetra zanakalahy sy zanakavavin 'ny Tompo. Miala tsiny ianao hanisy ratsy olona, Misaotra rehetra aingam-panahy ianao amin'ny fiainako!
Burton • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:13 PM • navalin'i
Afa-tsy ny marina rahalahy, na dia fotsy aho, Te-hahazo any an-vatam-paty miaraka ya'll, ka ho sosotra rehefa malahelo. Aho nanaraka anao nandritra ny fotoana ela ary ity no lalana definately iray ny favoris! Tia izay tena manao ho antsika ny Tompo amin'ny alalan'ny Trip, Tohizo fa tsara.
Dayo • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
Coulda nisy na iza na iza… Trip Lee * ankihiben-tànany ny *
Shelby • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:35 PM • navalin'i
Hey diany, Misaotra noho ny fizarana ny fonao. Raha Tsy izaho no tanora lehilahy mainty hoditra, ary mba tsy tena mbola mahalala, Miezaka aho hanimba aminao. Misaotra izany, hitondrany ny hevitra fa ny ratsy polisy ary ataovy mafy ny 90% ny tsara manamboninahitra ary tiako ny hevitra izay mendrika isika rehetra mitovy tahaka ny endrik'Andriamanitra, ary izany no misy ny fanantenantsika dia tokony ho. Anie ny fahasoavana sy ny Peace Rahalahy.
TBrant • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:38 PM • navalin'i
Tsapako anao amin'ny olona ny tononkira. Miala tsiny fa izany dia tonga ho anao tamin'ny lasa ary aho hanisy ratsy anareo tahaka ny rehetra izay efa nampahoriana tamin'ny herisetra ity. Ny fiainana ny fitiavana ary mandeha amin'ny hafa, izay midika hoe hanisy ratsy aminy, ary mitomany miaraka aminy, no niantsoana antsika hanao amin'ireo izay ao anatin'ny fijaliana. I mangataka vavaka tahaka ahy amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra miady mafy ny olona tsirairay koa aho, fa hiaro anao sy ny olona tafiditra ao amin'ny vavaka izany ihany koa. Tia anao Bro. Enga anie tsy hitsena anao fa tiako ianao.
Andrew • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:43 PM • navalin'i
Tsy azoko izany #couldabeenme. Trip Efa mpankafy elaela mba tsy kristianina ianareo, fa hafa rappers izay niteny avy izao mikasika ny zava-nitranga in Ferguson, na izany aza lasa kivy aho vao haingana amin'ny fitarainany noho Ferguson.
Indro, Izaho ho upfront aho 25 taona lehilahy fotsy. Tsy azoko hoe manao ahoana izany ho vitsy an'isa any Etazonia. Tsy te aho mbola nisy nisintona ny noho ny firazanana. Mbola tsy nisy Nosafosafoiny teo noho ny firazanana. Mbola tsy natao indray noho ny firazanana. Ary ireo zavatra ireo aho hoe: Azoko tsara cant.
Na dia miresaka momba ny zavatra cant aho hahafantatra mamela miresaka momba ny #couldabeenme tenifototra. TENA?!? Mety ho anao?!? Ianao no nangalarina sigara avy amin'ny fivarotana ary avy eo dia mety tsy nihaino ny polisy? Ianao dia manohitra fisamborana? Dia ho namely ara-batana, na ratsy fanahy izay nampijaly iray manao fanamiana manamboninahitra?!?
Masìna ianao, lazao amiko hoe nahoana ianao no hanao ireo zavatra!
Hitanao raha mbola hahatakatra fa izaho tsy hahafantatra izay izany dia tahaka ny ho vitsy an'isa any Etazonia no nipetraka any ampitan-dranomasina. Nipetraka tany Eoropa aho noho ny 8 taona. Raha mandany fotoana any Eoropa dia hitako fa firenena rehetra manana kolontsaina hafa. iray amin'ireo zavatra ny fianakaviako nahita izay tena mahaliana dia isaky ny mihaona ny olona mainty hoditra tany Eoropa izy ireo avy any UK. Ny olona rehetra tamin'izy ireo niteny anglisy sy mety dia tena nahalala fomba sy niakanjo tsara. Tsy misy tamin'izy ireo nanao ny pataloha manodidina ny lohaliny.
Hitanao nisy kolontsaina isan-karazany any izay dia tsy azo ekena fa ny tanora hanao zavatra toy ny jiolahim-boto. Eto ao Etazonia misy paosy ny kolontsaina izay no ara-dalàna, dia hasandratra hanao toy ny jiolahimboto. Nahoana no tsy sahy???
Inona no tsy maintsy rehetra izany ifandraisany amin'ny Ferguson?? Eny ary miantso ny olon-drehetra no Michael Brown ity zanak'osy tsara zanak'osy. Ny tiako ho lazaina izy ho any amin'ny oniversite! Tsara satria raha mandeha ny oniversite mitovy maha-tsara ny ankizy? Ndeha hijery ny zava-misy dia tsy tsara zanak'osy. Izy dia mpangalatra sy mpanao olana. Tamin 'ny farany dia tsy nihaino ny fahefana ary ity farany hitarika ho amin'ny fahafatesany.
Ny zavatra tsy azoko dia ny hoe ho Trip izany hitranga, fa ny “couldabeenme” dia ho tsy maintsy hanao ireo zavatra ireo koa. Dia ho maintsy mangalatra avy amin'ny fivarotana ary avy eo dia niady ny polisy izay nijanona anao rehefa afaka izany.
Amin'ny farany, Mampalahelo ny zava-nitranga! Na izany aza dia tsy ho anao. Mety tsy ho ahy. Izany no tsy hoe satria aho 25 lehilahy taona. Satria tsy tiako tsy hangalatra ary tsy hiady ny polisy. Ireo no olana eto. tsy hazakazaka.
Kori • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:46 PM • navalin'i
Michael • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:48 PM • navalin'i
Grace, fandriampahalemana, amin'ny fitiavana sy ny famindram-po avy amin'ny Andriamanitra sy Dada
voalohany, Te-hidera an'i Jehovah noho ny famonjena sy ny mpanomponao rahalahy Hood. Ianao ho alalan'ny Ray tsara. Aho ny milaza fa voatahy ianao mpanakanto voalohany izay nampiasain'Andriamanitra mba fiantraikany be ny mandeha vao ny famonjena ahy. Natao voavonjy in Desambra ny 2006 ary izaho dia tena nandinika lalina ny Hip Hop / Urban ny kolontsaina fa sarotra ny hidirana fotsiny ny fivavahana ankehitriny mihaino, “I Love Music”. Ankasitraho ny tafatafa sy ny toro-hevitra momba ny fanentanana ara-kolontsaina araka ny mikasika ny fanompoam-pivavahana ara-baiboly sy ny fomba miovaova.
Enga anie ny Tompo hitahy anao ary hampitombo ny vokatry ny aminareo miasa!
Pastor Bill, ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anao koa…na dia miombon-kevitra tanteraka momba manohitra ny fisamborana aho mino mafy fa misy fitsipika izay tokony ho nanohana sy ampiharina ho an'ny dratsy ny fomba / asa.
Michael • Desambra 4, 2014 amin'ny 4:50 PM • navalin'i
Nanadino tanteraka ny misaintsaina hira. Ny rahalahy malalantsika Mino aho fa izao fihirana izao ny atao hoe tena nanodidina hop izahay no nahatapaka ranjo sy izay dia natao ho…
Zander • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:10 PM • navalin'i
Me manokana Tsy miombon-kevitra amin'ny ity hira ity. Izany dia mampiseho ny fanavakavaham-bolonkoditra izay Marina fa ao Amerika. Ny olon-drehetra nitaraina fa ny fotsy hoditra no fanavakavahana fotsiny satria nataony tao asa. Raha nisy lehilahy mainty hoditra, izay nitifitra ny ankizy (izay tonga ny mpiandry raharaha basy) Shot azy na inona na inona raha ny voalaza hoe: na inona na inona. Fotsiny ny hevitro, ary mihatra ny fankahalana :)
Jason • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:24 PM • navalin'i
Misaotra anao vonona ny hanana fifampiresahana Bro. Manana olana eo amin'ny firenena izay tokony ho faty eo amin'ny lafiny rehetra, ary ny hany fomba hanaovana izay ao amin'i Kristy Jesosy!
Mila mampiseho ny olon-drehetra ny fitiavan'i Kristy – ka dia atambatra kely lahatsary tsara ny fitiavana… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
Whitney • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:26 PM • navalin'i
Izany mihitsy ny fomba tsapako! Izany no tsara tarehy sy madio fitenenana. Mivavaka miaraka sy ho anareo Bro! Tiako ianao, ary mankasitraka ny fanompoanao rehetra.
Ben • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:15 PM • navalin'i
Trip fotsiny Te ho fantatrao aho hanisy ratsy ho anao sy mahatsapa ho vesaran'ny ho tafiditra ao anatin'ny vahaolana. Aho talen'ny tanora ao amin'ny fiangonana iray suburban amin'ny ankizy fotsy ny ankamaroany, Nandany ny alina Alarobia fianarana amin'izy ireo omaly alina antsitrika an Andriamanitra teny fanampiana azy ireo hahatakatra ny antony misy maratra eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, Ahoana no maha mpino isika mba Aoka ny fitiavana rakotra rehetra ary aoka ny fahazavan 'i Kristy hamirapiratra, fomba tokony mitomany amin'izay mitomany, ary mifaly amin'izay mifaly. Dia nandany androany alina @ ny hetsika atao hoe Finoana Rx izay Mety ho fantatrao tsara, manome io hafatra amin'ny olon-dehibe. Fantatro ny lalana mankany amin'ny fanasitranana ny ela ho an'ny rehetra ihany no mandray anjara ary ho tena rehefa hampifantoka ny masontsika amin'ny mpanjaka ka ho velona tahaka ny an'i Kristy. Tena miala tsiny aho fa ny fanaintainana eo amin'ny roa tonta, ary te ho fantatrareo Efa ary manohy mivavaka ho an'ny fo ireo fanovana eo amin'ny maso jamba. Ataovy ny lohanao ny, Andriamanitra mahatoky sy tsara, ary manohy manao izay efa nitahy anao, ianareo kosa manao ny fahasamihafana.
Osakpolo • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:43 PM • navalin'i
Misaotra betsaka noho izao fihirana izao, satria izany ihany koa eritreritra mandalo an-tsaiko. Mitovy amin'ny 21 lehilahy mainty hoditra taona any Boston I mankasitraka fa afaka mitraka ny lehilahy kristianina toa anao.
Angelique • Desambra 4, 2014 amin'ny 7:54 PM • navalin'i
Mety efa nisy iray ny 4 lahy! Misaotra anao Trip. Mivavaka aho mba hisy intsony ny olona miezaka ny handresy ny fifandirana, ary tena mihaino ny fo ny olona.
GageGuest • Desambra 4, 2014 amin'ny 8:24 PM • navalin'i
teip Lee mampalahelo ny foko rehefa avy nijery ihany koa ny lahatsary farany ny olona ho faty gettin chocked.
I ahoan-tsy ahoana nitsara anareo ry zalahy ny miteny ny. Nijery azy ny olona mihevitra fa tsy ara-pivavahana ny didy mba hifankatia. Miala tsiny aho ho an'ireo rahalahy tany i Jesosy no nitsara drariny.
Fantatro fa izaho no tsy tonga lafatra ary mila tia isan'andro Andriamanitra. Izy no tsara tarehy ho ahy. Ary niaro ny aiko androany avy amin'ny fanahiana mahatahotra fanafihana. Noheveriko aho ho faty nefa tsy namela izany.
Aho handeha hisaraka tena tsy haino aman-jery ara-tsosialy rehetra (hamafa azy ireo) ho akaiky kokoa an'i Jesosy sy hiara-mandeha amin'ny fanahy sy ny fahamarinana!
Raha toa ve ianao te-hiresaka na manana ny isa dia manoro hevitra 580-509-5059
Mauricio Arriaga • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:45 PM • navalin'i
Afaka mivavaka ho ahy Rahalahy tiako tena mankasitraka azy io aho, tsapako Iike mila 'Andriamanitra bebe kokoa, satria tsy ampy ny azy aho 13 taona zazalahy avy Kerman California ary ianareo ry zalahy no modely kristiana aho fa mandeha foana miverina amin'ny fahotana sy reraka aho ny mihazakazaka ho fahotana Te-hanova ny fiainako aho, te-ho olom-baovao afaka ianao Mivavaha mba tsy miasa amiko ka afaka ho tsara kokoa kristiana <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patricks Ny Jr. • Desambra 5, 2014 amin'ny 12:06 aho • navalin'i
Tsy mba nihaino ny hira fa ny tononkira milaza fotsiny izany rehetra, ary fantatro fa tsara hira antony izay no ataonao tsara indrindra. Andriamanitra anie hitahy anao bebe kokoa
NicholasTracy • Desambra 5, 2014 amin'ny 1:30 aho • navalin'i
Amin'ny voalohany, rehefa nahita ireo Lahatsoratra, Tsy mahazo izany. Tsara tarehy be fotsiny aho, dia nataony manorisory, ary aho tsy mba menamenatra izany ankehitriny. Rehefa avy mihaino io hira io sy Derek vao haingana Minora famotsorana, Aho ary tsaroako fa ny fahasoavana dia lehibe avy amin'izao, ary ny ampahany tsy hita indrindra aho. Tsy maka fotoana mieritreritra momba izany avy amin'ny fomba fijery samihafa. Amin'ny maha-mpianatra afovoany bandy fotsy manatrika ny oniversite, Dia nanana fotoan-tsarotra fahatakarana fa efa nijery fomba hafa hafa, Izaho sy ianao. Na izany aza, indray mandeha dia noraisiko ny fotoana hanaovana izany, masoko nisokatra toerana hafa noho ny toerana efa aho teo amin'ny fiainako iray manontolo. Te-hiala tsiny amim-pahatsorana noho ny tsy maka fotoana izany mba hahita ny zavatra amin'ny fomba fijery, ary te-handrisika ny rehetra mba hanatona izany rehetra izany amin'ny fahasoavana ao an-tsaina. Tena manan-danja. Misaotra anareo aho noho ny famoahana ity hira ity, Derek Minora noho ny fanafahana ny, ary ny 11Six tantsambo izay efa niteny momba ity olana ity ary nizara ny fahendreny.
Kentrel • Desambra 5, 2014 amin'ny 1:58 aho • navalin'i
Trip Lee be fitiavana ity lehilahy hira tsy misy lainga. Nila izao karazana hira mba hisintona ny lohanay avy tao anaty tatatra, ka jereo izay tian'Andriamanitra antsika hanao. Aho teo amin'ny asa fitoriana ny hanao ny hira toy ity lehilahy ity. Enga anie Andriamanitra hanampy antsika rehetra amin'izao fotoana sarotra.
Edward • Desambra 5, 2014 amin'ny 8:11 aho • navalin'i
Aho mpitandrina ny fiangonana tao amin'ny tanàna kely any Arkansas ary tsy mahazo nijanona ny polisy noho ny antony tsy mazava……..INTSONY. Izay tsy foana ny raharaha. Ny rahalahiko dia nijanona izaho sy ary nilaza mba nivoaka ny fiara nambanana basy sy izay rehetra nataontsika dia fiara an-tanàna any amin'ny faritra avaratr'i Wisconsin. Izahay dia 19 na 20 taona. Dimy taona talohan'izay izahay nandeha an-trano sy ny fiara polisy trailed moramora izahay nandritra ny telo vato na dia alohan'ny nijanona antsika. Dia hoy ireo izahay, toy ny sasany nijery ahiahiana amin'ny halatra.
Hoy aho hoe tsy hitranga intsony mino tanteraka fa mbola afaka ary ny zavatra afaka mandeha haingana zava-dratsy.
Aho nampahafantarina ny kristianina amin'ny alalan'ny Hip Hop kaa ary mihaino ny teny ao amin'ny hira ny fotoana rehetra. “Mitsangàna” tsy miraika, hatsiaka, hatsiaka.
Ny teny milaza ny marina momba an'i Kristy tamim-pahasahiana sy 116.
I mankasitraka izany fanambarana feno fahasahiana, izay mijery ny sary lehibe ka tsy manasaraka sy mifantoka amin'ny zava-nitranga iray.
Rehefa niteny ny olona mainty rehetra fantatrao no niaina izany…Izaho iray tamin'izy ireo.
Hanampy ahy amin'ny fotoana rehetra.
Ataovy rahalahy mitory.
OtiatoMargy • Desambra 5, 2014 amin'ny 10:06 aho • navalin'i
Tena namana ananantsika ao amin'i Jesosy; Ny fahotantsika rehetra sy ny aretintsika hitondra, rehetra izany dia noho isika tsy mitondra ny zava-drehetra ho an'Andriamanitra amin'ny vavaka.. Mafy izany fa Andriamanitra dia afaka manakana raha mamaly ny tsy afa-manoatra tanteraka ho amin'ny fahasoavana izay mihoatra noho ny ampy. Azontsika atao ny manontany fanontaniana maro, hanontany ny maha etc., nefa malahelo ny valiny rehetra Andriamanitra efa nanome ao amin'ny Teniny isika, raha mikaroka ihany ny soratra masina. Raha hatramin'izay nila an'Andriamanitra, fa NOW fa ny finoana dia, rehefa mahatsapa ny rafitra matoky isika mba hiaro antsika tsy. Andriamanitra no aro sy hery ho mora azo indrindra amin'ny andro mahory… Ny manantena an'i Jehovah, Andriamanitry ny Baiboly amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy antsika sy ny Andrian'ny fiadanana, fa Noho ireo antony ireo no naka ny toerana ho faty toy izany isika maimaimpoana ao amin'ny Malala, ary ho afaka na inona na inona ny fahasamihafana. Tsy tokony hiandry ny zava-nitranga hafa tsy azo ihodivirana amin'ny tahan'ny ity, andao hiverina any amin'Andriamanitra, ny fitiavana voalohany. Tsy nandao azy na oviana na oviana Izy, fa nandao antsika. Izy dia miandry, mba hanasitrana ny ratra sy ny akanjo antsika ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, ka mendri-kaja isika tahaka ny zanany ho andevo tsy afa-baraka izay tsy manana zo. Andriamanitra no Raintsika, dia an'i Azy, Izy dia tompon'andraikitra isika no mila Azy Dada! Manana izay rehetra ilaintsika anisan'izany ny zon'olombelona!
Sammychris68@gmail.com • Desambra 5, 2014 amin'ny 10:10 aho • navalin'i
Ny tsy Amerikanina, izany no mitranga na aiza na aiza manerana izao tontolo izao…Mijoro ho vavolombelona aho ny rahalahy iray izay nandoro ny mpiray rahalahiny alife ny solika izy satria raha mbola kristiana izy Silamo, izay 3 mpianatra tsy manan-tsiny izay nandoro noho ny heloka bevava izy ireo tsy manao in portharcourt Nizeria, izay fanapoahana baomba famonoan-tena mitranga, miaramila izay namono olom-pirenena iray manontolo ao amin'ny fiaraha-monina noho ny antony ara-politika, Nizeria dia iray amin'ireo firenena izay zavatra hafahafa izay ho tonga any am-bibble mitranga. Mila vavaka Ora manerana izao tontolo izao…Miaina miaraka amin'ny silamo dia tsy mora.
MargureteMensa • Desambra 5, 2014 amin'ny 2:31 PM • navalin'i
Whatev. Ity misy soso-kevitra: quitcherb * tchin, mitombo ary mandray anjara zavatra tsara ny fiaraha-monina tena mifantoka afa-tsy ny fihetseham-po. -Dalana ry zareo over Misy laharana.
Marchauna • Desambra 5, 2014 amin'ny 3:07 PM • navalin'i
Dia nanana fahafahana mihaino anao amin'ny WinterJam in Spokane, Washington ary tena voatahy noho ny mozika. Homarinana avy amin'ny teny nivoaka ny tranonkala anio ka nahita ny lahatsoratra mikasika Ferguson. Misaotra anao nizara. Andriamanitra ihany vao haingana nanokatra ny masoko ho amin'ny zava-misy ny fanavakavahana sy ny fanavakavahana any Etazonia sy ao amin'ny Fiangonana. Efa nivadika ny foko, ary izaho miezaka ny hianatra zavatra betsaka araka izay mety mba hahafahako manana ara-baiboly, Manome voninahitra an'Andriamanitra, toe-tsaina. Ny lahatsoratra nanohina ahy ny lalina, ary manome ahy zavatra hizara amin'ny rahalahy sy rahavavy izay nanana fo sy ny maso no tsy mbola nisokatra. Mivavaka ho Rev 7 Fiangonana sy ny Fanahy Masina mba hitondra faharesen-dahatra ho ny olona “ny West”. Aza nefa tsy ho sasatra na kivy mbola…ny Vatan'i Kristy mila ny hafatra, fahitana, sy ny fitiavany.
fundmc • Desambra 5, 2014 amin'ny 3:17 PM • navalin'i
Tiavo ny tsara hafatra. Manana foana ny finoantsika ny Tompo ary tsarovy mba hitory ny vaovao tsara any amin'ny fotoan-tsarotra.
L • Desambra 6, 2014 amin'ny 11:33 aho • navalin'i
Trip, Misaotra anao indrindra. Misaotra anao noho ny fitiavanao ny hafa raha efa mankahala anareo. Misaotra anao nandray ny fon'i Kristy ny fiangonana – ny iray iraisana – ary mandeha toa Azy, rehefa sarotra ary rehefa mora. Mankalaza anao sy ny fianakavianao ary ny lalina ianao efa ho tia an'i Jesosy koa. Misaotra anao.
Kathleen • Desambra 7, 2014 amin'ny 3:11 aho • navalin'i
Vao tafintohina manerana izao ka te-milaza fa ny valiny dia azo itokiana, amin'ny fo sy ny saina. Mijoro ho vavolombelona aho ny hanisy ratsy, ary hahatsapa ny alahelo aminao. Afaka mifandray be izany noho ny lahy sy ny vavy. Aoka ny sary an-tsaina ny andro ny olona rehefa mahazo mifototra amin'ny inona ny ao anatiny sy ny hatsaran-tarehy mitady izay misy.
Margurete • Desambra 7, 2014 amin'ny 12:27 PM • navalin'i
ok, dia hitako ny fomba mandeha. voalohany, Heveriko rehetra nandefa fanehoan-kevitra tsy maintsy ho manohana ny mampalahelo sappy hiaka zaza hira na tsy hatao navoaka. Ary toa tsy ianao na ny iray amin'ny (tsara) mpaneho hevitra mahazo ny esoeso momba ny zava-misy ara-bakiteny ny olombelona an'arivony ho very isan'andro manerana izao tontolo izao avy amin'ny olona eo amin'ny olona iray ny herisetra nefa ny lanja, asthmatic mainty lehilahy maty rehefa fanoherana fisamborana, dia mitranga ny tratra tamin'ny fakan-tsary, ary ankehitriny dia efa sainted azy, ny hazakazaka nilalao karatra, Nanoro hevitra hialana amin ny polisy manerana ny firenena rehetra, tahaka ny mahery loatra ka niantso ny fikomiana-pirenena. Fanontaniana iray monja: raha olona niasa mafy toy ny manao velona ho an'ny tenany sy ny fianakaviany amin'ny ara-dalàna, Mety va raha tsy izany fomba nentim-paharazana tsy ara-dalàna lamaody fa tsy ara-dalàna ny asa mety mbola ho velona izy amin'izao fotoana izao? Raha kely indrindra dia ho voatsimbina ny sappy tena fo.
WhiteVictim • Desambra 8, 2014 amin'ny 4:05 PM • navalin'i
Izaho dia fotsy hoditra izay miasa amin'ny tanora avy amin'ny firazanana sy fiaviana isan-karazany. Amin'izao fotoana izao, 80% ny vondrona dia mainty sy ny hira manafintohina ahy. Efa nividy maro ny dika mitovy ny CD ny hanome an-vondrona nefa intsony. Ny lafiny Atsimbadiho ny hira “Mety ho ahy” dia tena ianao hoe:, “Mety ho anareo” (fotsy hoditra) izay afaka nanao izany tamiko (lehilahy mainty). Ianao WHITEwashing ny tena olana ao am-pony ary izany dia fahotana. Amin'ny maha-mpanakanto kristianina ho fantatra tsara fa ianareo no manao ny hafa manao: ianao renivola eo amin'ny fahafatesana ny olon-kafa mba hivarotra ny mozika sy manangom-bola. Ianao no mahalala mitovy amin'ny Al Sharpton. Vakio ny tantaran'ny ny fanolanana & famonoana ny mpivady fotsy Channon Christian, 21, ary ny ankizilahy Christopher Newsom, 23 eo amin'ny tanan'ny olona izay sendra mainty. Ity tantara ity tsy nanao ny lohateny satria ny fahafatesana mahatsiravina ny fotsy hoditra tsy mivarotra taratasy na hira rap. Mety ho ianao fa tena nanjo azy. Noho izany, nahoana no tsy mihira momba izany. Antenaina, dia hamela izany ho namoaka ary mbola nandefa.
Tom • Desambra 8, 2014 amin'ny 10:54 PM • navalin'i
Wow. Tsy maintsy ho fadiranovana maha-niharan-doza ny fiainana manontolo. Tia tokoa ny fahoriana orinasa, anefa.
Ny hira saika nahatonga ahy halahelo ho an'ny tenako koa mihevitra ny zavatra ratsy rehetra nataonao tamiko indrindra. Inona no maha samy hafa ny ahy sy ianao? I misafidy ny mianatra avy amin'ny lasa, ary hifindra amin'ny. Angamba aho tany amin'ny diso. Angamba tsy rariny aho. Iza no hiraharaha.
Aho izay mahery noho.
p.s. Aho lehilahy fotsy, ary Izaho koa dia efa nisy fifandonana tamin'ny fampiharana ny lalàna ho toy ny tanora indray mandeha tsy ho nandidy. Misaotra an'Andriamanitra aho isaky ny iray amin'ireo toe-javatra sy ny fomba nianarako avy amin'izy ireo.
Thomas • Desambra 10, 2014 amin'ny 11:38 PM • navalin'i
Trip Lee no tena fahazavana hoditra, dia afaka mandroso fotsy. Ny vadiny sy ny ankizy ihany koa ny mitady fotsy. Ahoana no milaza tena ho tonga mainty, na manana traikefa mitovy toy ny mainty hoditra.
Eny fotsy aho ary na dia fantatro fa sarotra kokoa ny fiainana ho an'ny mainty hoditra amin'ny maizina hoditra.
Avia Jesosy Tompo!
Trip Lee • Desambra 22, 2014 amin'ny 1:59 PM • navalin'i
Io no fanehoan-kevitra manahiran-tsaina, ary mampiseho ny kely ianao hahatakatra momba ny fiainana ho an'ny mainty hoditra any Amerika
Lori • Desambra 21, 2014 amin'ny 4:14 aho • navalin'i
ankehitriny, satria ny famonoana ny roa NYPD mpifehy, Nihevitra aho tamin'ny farany aho hitady ny lahatsary Eric Garner_I nijery azy io, Afaka mijery ihany no hiatrehana azy io indray mandeha; Tena aho amin'ny dis-mino!! Ny ranomasony dia tondra….Ahoana no sahy fucking ny polisy, Ahoana no Dar azy ireo !! Miala tsiny aho ho an'ny Eric SO ny fianakaviana, sy ny namany. Fantatro fa tena olona lehibe, tsara tarehy, manome fanahy. RIP Eric Garner.
White aho vehivavy, amin'ny tany am-boalohany 50 ny, Tsy mbola nonina tao amin'ny tanàna toy izay nataon'i Eric. Tombontsoa aho, fandrao; I miasa mafy, manan-tolona manao mihaona farany; Efa diso eo amin'ny asa toerana; tena mampijaly, voaroaka, amin'ny mihoatra ny indray mandeha; Tsy manana zo, tsy misy miraharaha, ny EEOC, dia crock ny ….! Nandritra ny fiainako, Efa nanana mihazakazaka ao na roa miaraka amin'ny cocky polisy; fa, Efa nanana traikefa ihany koa amin'ny maro tsara polisy. Tsy misy fialan-tsiny mahafa-po ny zavatra noraisina momba ERIC; izy nandika SO, Raha jerena ankapobeny ary maty teo am-tanan'ny polisy iray cocky. Tsy afaka mahatakatra ny tsy fahombiazana eo amin'ny rafi-pitsarana; Mihorohoro fotsiny aho ny lohako, Tsy hahafantatra ny tokony hatao; raha mijery ny vaovao, ary mihaino ny stories_it repulses ahy! Ray aman-dreniko nanangana ahy mba tsy hahita loko(S)… iray ihany izahay rehetra; isika rehetra ho avy amin'ny fari-piainana; Maro amintsika no efa tolona, maro tolona mandritra ny fiainana; fa toy izany koa ny rà mikoriana amin'ny alalan'ny lalan-drantsika. Na dia, Tsy mbola nisy teo amin'ny “lafiny ratsy ny lalàna;” ny rahalahinao manana, Izy no White, no fotoana tany am-ponja(10yrs) ho an'ny sasany kely heloka bevava izay tsofina tanteraka amin'ny ohatry; dia efa nivoaka ho eo 15yrs izao; izy amin'ny toerana iray nandritra ny fotoana fohy dia fehin rojo(2yrs,) ka dia antony ny polisy eo an-toerana mba hahalala azy tsara, ary tenitenenin'izy ireo lava azy, foana, tamin'izany fotoana izany. Izany dia midika hoe efa 15yrs, Tsy misy olana, Ary mbola vokany hassled mandraka androany, dia Mampalahelo; dia mbola mandoa ny heloka bevava, na dia efa vita tsara ny fotoana. Tsy fotsiny Black olana, dia rehetra ny olana. Misy be dia be amin'ny zava-drehetra amin'izao fotoana izao ratsy, ary ankapobeny, tena tsy manana zo…fa raha toa ka tsy manao izany amin'ny fomba tsara isika avy eo diso, ary voasazy amin'ny fomba samihafa. Na dia, dia maro ny olona ratsy eto amin'ity tontolo ity, olona iray izay tsy nanisy vidiny ny ain'ny olona iray hafa, mpangalatra, jiolahim-boto rehetra loko; mila polisy mba hanampiana ny ady heloka bevava; izy ireo no mety misy velona andro maro; fa ny fanaraha-maso, ny fari-kery, ny tsy mihaino ny olona, ny fahatsapana cockiness; dia tena foana ny raharaha ianareo dia meloka, tsy manan-tsiny mandra-voaporofo, ary ny olona rehetra manerana firenena ity dia hoe entina toy ny izy ireo tsotra izao fa ny mpitandro filaminana(“lalàna manam-pahefana.”) Tsy maintsy STOP! ny “lehibe” firenena, Tsy tena lehibe toy izany amin'izao fotoana izao…manomboka amin'ny governemanta, nitsitaitaikan'i nidina ho any amin'ny polisy ao an-toerana.
Back to Eric, indray, tena miala tsiny aho, ary mampalahelo ny fianakaviany sy ny namany. I tena misfortunate hetsika…Manantena aho fa amin'ny alalan'ny faharetana ny fianakaviany hahazo ny rariny ny sasany, Mazava ho azy fa tsy afaka ny hisolo Eric.
Fiadanana ho anareo rehetra.
Lori • Desambra 21, 2014 amin'ny 4:20 aho • navalin'i
Ny andininy faharoa dia tokony hilaza aho fa tsy tombontsoa fandrao! Oops.
AJ • Aprily 8, 2015 amin'ny 9:49 aho • navalin'i
Tsy mahalala akory hoe aiza no hanombohana. Izany indrindra ny fomba tsapako, izaho anefa mbola tsy dia Amerikana, fa satria mainty, satria fantatrareo fa ny olona no efa nampahorina ary avy eo dia novonoina mihitsy aza ny fahefana fotsiny fahoriana entin'ny fo, ary avy eo dia ny fahafantarana fa iray ihany no afa-maina fahefana toy izany ka mahatonga azy sarotra ny hino na rafi-pitsarana, tena. I mangoraka ny fianakaviana mandray anjara sy voakasika, na avy ireo niharam-boina, na mpanao ratsy lafiny.
Tammy • Aprily 9, 2015 amin'ny 6:31 PM • navalin'i
Bad polisy kosa manao azy ho ratsy ny tsara polisy.
Kianna • Mey 20, 2016 amin'ny 4:35 PM • navalin'i
Natoky Online Ao Indonezia • Jolay 17, 2017 amin'ny 5:39 PM • navalin'i
Mahafinaritra ahy ny mamaky ny lahatsoratra izay hahatonga ny olona hieritreritra.
koa, misaotra anao noho ny mamela ho ahy ny valin-!
mozika-tsoratra • Jolay 19, 2017 amin'ny 12:25 aho • navalin'i
saingy, dia nijanona marina tamin'ny mozika sy ela niainana hanoratra ny 800 hira ka mandrenesa ny musics miakatra
avy amin'ny laharan-tseza voalohany pews ny amboarampeo mijoro, izay nisy izany teo aloha
voarara. Mahery solosaina, sasany mics, Hafanàm-po an-peo iray workstation, ary kely fantatrareo-Ahoana no,
na iza na iza dia afaka hanoratra sy hizara mozika. saingy
avy eo, ny fahatongavan'ny aterineto, haingam-pandeha, Compressed-peo format sy ny maro hafa
portable mpilalao haino aman-jery no nahatonga ny revolisiona fiovana ao amin'ity orinasa.